Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 7)
Otu esi edekọ mgbatị na Google Fit
Otu esi edekọ mgbatị na Google Fit. Chọpụta usoro iji mee ya na android na Wear OS n'iji ngwa Google.
[APK] Download ES File Explorer version 3.2.5, onye dị mma bụ onye na-enweghị bloatware
Kedu ka anyị ga - esi bulite egwu na egwu Google Play. Chọpụta usoro iji bulite egwu na ikpo okwu egwu Google.
E wepụwo SuperSU na Playlọ Ahịa Play
SuperSu apụla na Playlọ Ahịa Google. Chọpụta ihe banyere iwepu ngwa a sitere na ngwa ngwa.
Citymapper, ngwa ngwa njem dị mkpa maka ndị bi n'obodo
Maka ndị bi n'obodo dịka Madrid ma ọ bụ Barcelona Citymapper bụ ngwa dị mkpa iji gbagharị ma gbanwee oge mbata.
Nyere ndị enyi gị aka ịgbanahụ site na ịse ahịrị ndị Pixel Izere
Ihe nhicha Pixel bụ egwuregwu dị mfe nke ị ga - adọta nyiwe nke ndị enyi gị ga - agafe.
Etu esi ewepu ngwa Google gị na ngwa, egwuregwu, na ngwaọrụ ejikọrọ
Etu esi tinye uzo ọ bụla anyi na eme kwa ubochi na Google Maps
N'ụzọ dị otu a, ịnwere ike ịgbakwunye ụzọ sitere na Google Maps na desktọọpụ wee si otú a bido ya ozugbo, na-echekwa oge ịhazi ya.
Etu esi gbanyụọ ọkwa nke ọkwa na Google Chrome
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ịhụ ozi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ọkwa nke isiokwu ọhụrụ oge ọ bụla ị gara na weebụsaịtị, mgbe ahụ anyị ga-egosi gị otu esi gbanyụọ ya.
Esi edozi nzuzo na Facebook
Usoro 5 iji hazie nzuzo gị na Facebook. Chọpụta karịa otu anyị nwere ike isi melite nzuzo anyị na netwọkụ mmekọrịta.
Nkata ụdị ihe nkịtị niile dị na GarbageDay, egwuregwu dị mfe, mana nwere ụdị ọhụhụ dị egwu mgbe ọ na-ese onyinyo.
OUKITEL K7 Ike: Ihe omuma ohuru nke nwere batrị 10.000 mAh
OUKITEL K7 Ike: Ugwu ohuru ohuru. Chọpụta ihe banyere etiti ọhụrụ a site na akara ndị China nke ga-ada ahịa na ọnwa a.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na kaadi microSD anaghị arụ ọrụ na ekwentị gam akporo gị
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na kaadi microSD anaghị arụ ọrụ na gam akporo. Chọpụta ihe maka usoro ị ga - ewe mgbe kaadi microSD anaghị arụ ọrụ na ekwentị gị.
5 free ngwa na ị ga-wụnye na gị gam akporo ekwentị
5 free ngwa n'ihi na gị gam akporo ekwentị. Chọpụta ngwa ndị a n'efu ị nwere ike ibudata na Storelọ Ahịa Play.
Kacha mma ozi ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Ise kacha mma ngwa ngwa maka gam akporo. Chọpụta karịa maka ngwa izi ozi ndị a maka gam akporo.
Bụrụnụ ndị maara ohi na Hooky Crook arcade
Hooky Crook bụ egwuregwu arụmọrụ dị mma emere nke ọma nke na-apụ apụ maka agwa ya na ọchịchọ izuru kittens.
Animus Harbinger, mma agha gị megide ìgwè ndị ajọ onye ahụ nọ nso ọgụ
Harbinger bụ ezigbo mma agha melee ọgụ egwuregwu na-adọrọ gị banye na gburugburu ikuku.
Kedu ihe asambodo IP67 ma ọ bụ IP68 na-echebe megide?
Kedu ihe bụ IP67 ma ọ bụ IP68 asambodo na ihe ha na-echebe megide. Chọpụta karịa gbasara asambodo ndị a na ihe ha pụtara.
Ọhụrụ interface eyi interface ga-amalite iru nlele mbụ
Smartwatches na-amalite imelite ọhụrụ Wear OS interface. Chọpụta ihe banyere mmelite na-abịa na nche.
Kedu ụdị ụdị mkpịsị aka mkpịsị aka dị na gam akporo
Kedu ụdị ụdị mkpịsị aka mkpịsị aka dị na gam akporo na otu ha si arụ ọrụ. Chọpụta ihe banyere ụdị akara mkpisi aka na otu ha si arụ ọrụ.
Gam akporo Oreo bụ nke atọ kachasị eji nsụgharị
Gam akporo Oreo na-positioned dị ka nke atọ kasị eji version. Chọpụta data nkesa ọhụrụ gam akporo maka njedebe nke ọnwa Septemba.
Rally kacha mma bụ egwuregwu ịgba ọsọ nke ị na-akụ n'oge gị
Rally kacha mma na-egwu kaadị ya nke ọma iji chee anyị egwuregwu egwuregwu dị mfe, mana yana nkọwa dị mkpa dịka ụdị ọhụụ ma ọ bụ sekit ya.
Etu esi ebudata ozi niile na profaịlụ Instagram gị
Etu esi ebudata ozi Instagram echekwara. Chọpụta karịa gbasara data nke ngwa a ma ama gbasara gị.
Maze: Onyinyo nke Ìhè, nnukwu arụmọrụ RPG na ihe osise ndị pụtara ìhè
Maze: Onyinyo nke Ìhè bụ ihe omume dị elu nke RPG nke ha rụsiri ọrụ ike n'ihe niile metụtara ọkwa teknụzụ.
Ngwa kachasị mma iji hazie gam akporo
Ngwa ise kachasị mma iji hazie gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a iji hazie akụkụ dị na ekwentị gị.
5 gam akporo egwuregwu na-enwe na a izu ụka
Egwuregwu 5 gam akporo iji nọrọ na ngwụsị izu a. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ndị a kụrụ ụlọ ahịa na Septemba a.
4 egwuregwu egwuregwu egwuregwu dị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu egwuregwu ị nwere ike ibudata na ekwentị gam akporo gị.
Nokia 7 Plus melite gam akporo achịcha
A gam akporo 9.0 achịcha na-abata na Nokia 7 Plus. Ekwentị na-amalite inweta ụdị anụ kwụrụ gam akporo gam akporo gburugburu.
A cat na a nkịta ọnụ na search nke njem na Meowoof, a kpam kpam free egwuregwu
Meowoof bu aha emereme nke n’etinye gi n’ihu nwamba na nkita nke ejiri eriri jikoo. Ihe njem nwere ọtụtụ awa igwu egwu.
Etu esi tinye a shortcut ka a website na gam akporo desktọọpụ
Creatmepụta ụzọ mkpirisi na ibe weebụ ma tinye ya na desktọọpụ kọmputa gị bụ usoro dị mfe nke ga-ewe obere sekọnd.
Nkwụ ụgwọ ekwentị na WhatsApp ga-erute Spain n'oge na-adịghị anya
WhatsApp ga-ewebata ịkwụ ụgwọ ekwentị na Spain n'oge adịghị anya. Chọpụta karịa gbasara njirimara ọhụụ ngwa izi ozi na-arụ ọrụ ugbu a.
Zọ kachasị mma iji budata ndepụta m3u
Etu esi eji ederede Google na ekwentị gam akporo anyị
Etu esi eji ederede Google na Android. Chọpụta ihe banyere otu esi eji atụmatụ a na gam akporo.
Kedu ihe anyị nwere ike iji Bluetooth maka na ekwentị gam akporo anyị
Kedu ihe bụ Bluetooth maka na ekwentị gam akporo anyị. Chọpụta ojiji dị iche iche anyị nwere ike inye teknụzụ a na gam akporo.
Otu esi egbochi ngwa gam akporo site na imelite
Otu esi eme ngwà na gam akporo obughi imelite. Chọpụta karịa otu esi egbochi mmelite na ngwa.
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ 20th nke Google!
Google gbara afọ iri abụọ, afọ iri abụọ kemgbe onye ọrụ ntanetị ya hụrụ ìhè ... etu Google siri gbanwee na otu ntanetị si agbanwe
[APK] Download ugbu a Dragalia Echefuola: Nintendo ọhụụ ọhụụ nke RPG nwere ihe karịrị 2,75GB nke ọdịnaya
Nintendo na-etinye anụ niile na grill na Dragalia Lost na ihe karịrị 2,75GB nke data iji nwee ọ RPGụ egwuregwu RPG niile.
Kedu mgbe anyị kwesịrị ịhazi ekwentị gam akporo anyị?
Mgbe ọ dị mma ịkpụzi ekwentị gam akporo anyị. Chọpụta ọnọdụ nke ọ bụ ihe amamihe na usoro gị gam akporo ekwentị.
Weather March 3 !!: Oke ihu igwe amụma ihu igwe 3 kacha elu
Etu esi ebipụta ngwa na Storelọ Ahịa Play
Etu esi ebipụta ngwa nke aka gị na Storelọ Ahịa Play. Chọpụta usoro iji bulite ngwa nke gị na Playlọ Ahịa Google Play.
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ekwentị gam akporo gị anaghị amata SIM
Nzọụkwụ ịgbaso ma ọ bụrụ na ekwentị gam akporo gị anaghị amata SIM. Chọpụta karịa ihe anyị ga-eme ma ọ bụrụ na amataghị SIM na ekwentị.
Ọ dị mma ịtọhapụ gam akporo Ram gị ugboro ugboro?
Hapụ RAM na gam akporo: Ihe ọ bụ na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Chọpụta ihe banyere ịtọhapụ RAM na ekwentị gam akporo gị, nke na-akpata ọtụtụ arụmụka n'etiti ndị ọrụ.
Etu esi eme mkparịta ụka na WhatsApp ka ị gụrụ
Ingdenye mkparịta ụka dị ka a gụrụ na WhatsApp dị iche iche bụ usoro ga-egbochi anyị igbu oge bara uru nke anyị nwere ike ịgwa ndị ọzọ
Etu esi ebudata ozi akaụntụ WhatsApp gị
Etu esi ebudata ozi WhatsApp nwere gbasara gị. Chọpụta ụzọ anyị nwere ike ibudata data nke ngwa ahụ gbasara anyị.
Bestzọ kachasị mma ịhapụ ohere na ekwentị gam akporo gị
Zọ kachasị mma ịhapụ ohere na gam akporo. Chọpụta ihe banyere ụzọ ndị a hapụ ohere na ekwentị gam akporo gị.
Android adịghị akwụ ụgwọ njikere, eriri USB kwụsịrị
Otu esi arụ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ọrụ na-ebugharị oku na gam akporo
Etu ị ga-esi rụọ ọrụ ma ọ bụ gbanyụọ oku na-ebugharị na ekwentị mkpanaaka gị. Chọpụta usoro iji ọrụ a na ekwentị gị.
Etu esi ejikwa ma ọ bụrụ na ngwa gam akporo awụnyere data. Chọpụta ndụmọdụ ndị a iji melite nzuzo nke ekwentị gị na ngwa gị.
Nri Google agbanweela aha ya na-achọ igosipụta ojiji ya karịa, ugbu a ka akpọrọ ya Google Discover ma weta ọtụtụ akụkọ na-atọ ụtọ
Ọ bụrụ n’ịkpọrọ ụdị 3DS nke Monster Hunter Akụkọ, ugbu a ị nwere ike ịme otu ihe ahụ site na ama gị mgbe etolitere ya na gam akporo.
Otu esi egbu oge na ozi email na Gmail
N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi yigharịa ozi nke email na oge site na Gmail.
Ibe nke File Explorer !!
Marginalia dike bu RPG puru iche nke nwere uzo nlere anya nke ndi na-ese ocha
Egwuregwu dị iche na-amasị gị, Marginalia dike bụ otu n'ime ha. RPG nke ị ga-agbanye na ihuenyo iji kụrụ akụ.
Kedu ihe bụ VPN, olee otu o si arụ ọrụ na gịnị ka ọ bụ? Chọpụta karịa ihe VPN bụ na ihe anyị nwere ike iji ya na gam akporo, na mgbakwunye na nke kachasị mma ebe ahụ.
Ugbu a, ị nwere ike ịmalite ịmepe nsị nke gam akporo 9.0 achịcha nke Samsung Launcher Experience na gị Galaxy na gam akporo 8.0 Oreo.
Etu esi ahụ ngwa ndị na-eri data kachasị na gam akporo. Chọpụta karịa maka otu anyị nwere ike isi hụ ma jikwaa data data mkpanaka.
Budata akwụkwọ ahụ aja nke Google Pixel 3
Izu abụọ tupu egosipụtara Google Pixel 3 na 3 XL ọhụrụ, anyị nwere akwụkwọ ahụ aja na anyị.
Deactivate ma rụọ ọrụ ihe mkpisiaka ihe mmetụta na oge niile na AdminControl
Ọ bụrụ n’inwere mkpa iwepu ihe mkpịsị aka mkpịsị aka mkpanaka gị, AdminControl bụ ngwa na-enye gị ohere ịme nke ahụ n’enweghi ndebanye mkpịsị aka gị.
Etu esi edozi ihe mmetụta ekwentị gị
Etu esi edozi ihe mmetụta nke ama ama gam akporo. Chọpụta ụzọ ndị dị adị iji nwee ike idozi ekwentị gam akporo gị n'ụzọ dị mfe.
Kedu ihe na otu esi eji smartphones SIM
Kedu ihe na otu esi eji ekwentị gam akporo na Dual SIM. Chọpụta ihe banyere ihe ha bụ na otu Dual SIM si arụ ọrụ.
[APK] Download Ghostbusters World ugbu a na gam akporo gị iji chụọ ghosts gburugburu obodo gị
Akpukpo Akwukwo Na-alaghachi na ihe ohuru ohuru Ghostbusters, egwuregwu nke edere na ihe omimi Ghostbusters.
Kpọọ Youtube na ihuenyo
Toyota na Google ruru nkwekọrịta iji nye gam akporo Auto na ugbo ala nke ụlọ ọrụ Japan
Companylọ ọrụ Japan bụ Toyota mechara nwee nkwekọrịta na Google iji nye gam akporo Auto n'ụgbọ ala ọzọ ya.
LG G5 amalite ịnata gam akporo Oreo
Onye ọhụụ LG G5 amalitela ịnata mmelite echere ogologo oge nke ọtụtụ ndị ọrụ tụrụ anya gam akporo Oreo, mmelite dị ugbu a na Korea
Kedu ihe kpatara ekwentị gam akporo gị anaghị akwụ ụgwọ nke ọma?
Na-akpata ihe mere gam akporo ekwentị gị anaghị akwụ ụgwọ nke ọma. Chọpụta ihe dị iche iche mere ekwentị anaghị akwụ ụgwọ nke ọma.
Dos na-eme ma ọ bụrụ na gị gam akporo ekwentị ọkọkpọhi Wet
Dos na emela ma ọ bụrụ na gị gam akporo ekwentị ego n'anya. Chọpụta ndụmọdụ ndị a iji zere nsogbu na ekwentị gam akporo na ọnọdụ a.
Kedu ihe bụ Odin na gịnị ka ọ bụ maka
Kedu ihe bụ Odin na gịnị ka anyị nwere ike iji ya. Chọpụta ihe maka mmemme Samsung a nke na-enye anyị ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ maka ekwentị.
Etu ị ga-esi nweta ọnọdụ mgbake na gam akporo
Otu esi enweta ọnọdụ mgbake na ụdị na gam akporo. Chọpụta karịa maka ụzọ anyị si enweta ọnọdụ a na nrụpụta gam akporo ọ bụla.
Kedu ihe bụ ọnọdụ mgbake na ihe ọ bụ maka?
Gịnị bụ mgbake mode na gam akporo na ihe ọ bụ maka. Chọpụta ihe banyere ịba uru nke ọnọdụ mgbake nwere na ekwentị gam akporo anyị.
Ndepụta ekwentị nke ga-enweta A gam akporo 9.0 achịcha
Ekwentị niile ga-emelite na gam akporo 9.0 achịcha. Chọpụta ndepụta a na ekwentị ekwenyela iji melite gam akporo 9
Ulateomie Rambo na retro Rip 'Em a New One, a anụmanụ arcade iji kpochapụ mmadụ niile
Can nwere ike iulateomi Rambo ma nwee oge ọhụụ na usoro ịgba agba ochie nke ị ga-ekpochapụ ọtụtụ ndị iro na-enweghị mgbaghara.
Kedu ihe bụ eSIM na uru ndị ọ na-enye
Kedu ihe na uru ndị eSIM na-enye anyị. Chọpụta karịa ihe ha bụ na uru ndị eSIM ga-erute n'ahịa ga-enye anyị.
Google Pay na-anwale koodu QR iji kwụọ ụgwọ
Google Payment ga-arụ ọrụ na ekwentị niile nwere ma ọ bụ na-enweghị NFC. Chọpụta karịa gbasara ule QR ndị a nke amalitere.
Omega Wars: Ndị mmeri nke Galaxy na-esote na Clash Royale, mana ya na Augment Reality
Ọ bụrụ na ị banye na Augment Reality, ị gaghị echefu Omega Wars: Champions nke Galaxy, egwuregwu PvP n'ụdị Clash Royale.
Akwụkwọ ahụaja Apex sitere n'aka onye okike nke onye na-ebupụta ama ama na akwụkwọ ahụaja 4K na ndị ọzọ
Have nwere ihe karịrị akwụkwọ ahụaja dị elu 1.000 nke ngwa ọhụrụ a na-akpọ Apex Wallpaper, nke onye mepụtara nke Apex launcher mepụtara.
Beta nke abụọ nke gam akporo gam akporo ekwentị Huawei ọhụrụ
Ọhụrụ gam akporo achịcha beta na-abịa Huawei na Honor phones. Choputa ihe banyere beta ohuru nke n’eme ka oganihu na oru ohuru.
Huawei na-ebunye ndị mmadụ kwụ n'ahịrị iji zụta iPhone XS batrị na-akwụghachi ụgwọ
Onye Asia na-emepụta Huawei ejirila kpụ ọkụ n'ọnụ kpochapụla nke Storelọ Ahịa Apple iji nye batrị batrị 200 mAh na-ewepu 10.000
Otu esi emepụta WebApps na Windows Linux ma ọ bụ MAC
Ihe nkuzi vidiyo ebe m na-akuzi ka esi mepụta WebApps na Windows Linux na MAC site na itinye ntinye nke Google Chrome na n’enweghi mgbakwunye.
Pro Evolution Soccer 2019 na-abịa gam akporo na Disemba
Pro Evolution Soccer 2019 ga-amalite na December na gam akporo. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke Konami ọhụrụ egwuregwu afọ a.
Okporo ámá nke iwe 2 Omuma, aha ọhụrụ SEGA Forever kụrụ Play Store
Street of rage 2 bụ ebe a, anyị na-agwa gị nkọwa niile nke usoro a na kpochapụwo SEGA Forever egwuregwu dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play.
Flipflop Solitaire, ma ọ bụ na-enye a gbagọrọ agbagọ na solitaire nke ndụ
Flipflop Solitaire bụ kaadị egwuregwu dabere na solitaire nke ịchọrọ ịgbanye akụkọ a site na ime ka ọ bụrụ kpochapụwo.
Ihe Nchọgharị Nzuzo Ghostery bụ ihe nchọgharị na-akwado maka nzuzo onye ọrụ
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ idebe nzuzo gị mgbe ị na-eji ekwentị mkpanaaka gị na-eme nchọgharị na ịntanetị, gbalịa ihe nchọgharị Ghostery Nzuzo Nzuzo.
Etu esi ebudata isiokwu maka MIUI, gụnyere MIUI 10
Egwuregwu kacha mma darts maka gam akporo na iOS
Gbọala ụgbọ ala Scalextric nke aka gị na XcaleHTR + Slot Car Simulation for Android
XcaleHTR + Slot Car Simulation bụ egwuregwu na-eme ka Scalextric dị ukwuu iji nwee ihe niile na ihuenyo mkpanaka gị.
Ngwa nchekwa ihuenyo kacha mma iji nyochaa ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma kpuchido anya anyị na ahụ ike anyị n'ozuzu
Enweghi ngwụcha Knights bụ RPG na ọgụ dabeere na ntụgharị maka ezigbo oge
Inifinite Knights bụ RPG na ọgụ na-adabere na ya nke pụtara ìhè maka ọdịdị ya, ọ bụ ezie na ọ na-esonyere ya na ọtụtụ mgbasa ozi.
Anyị amatalarị ihe Google Play Points bụ, mmemme ụgwọ ọrụ nke ụlọ ahịa Google
Site na Points Google ị nwere ike ịnweta micropayments n'efu, ngwa na egwuregwu vidiyo, yana ọdịnaya ndị ọzọ dịka akwụkwọ ma ọ bụ ihe nkiri.
Zụ ahịa na-aga n’ihu ịgbasa na Instagram
Instagram na-ewebata ịzụrụ na ngalaba ọhụụ. Chọpụta karịa banyere mgbanwe nke ngwa ahụ na-ewebata nke ahụ na nzọ.
Igodo na-ese n'elu mmiri na-abịa na Gboard na beta kacha ọhụrụ
Gboard enyeworị onye ọrụ ebe ọ bụ na beta beta ikpeazụ nwere ike iji keyboard na-ese n'elu mmiri iji gbatịa ahụmịhe onye ọrụ.
Galaxy S8 natara Emoji na Slow-Motion ọrụ nke Galaxy S9 na mmelite ya kachasị ọhụrụ
Mmelite nche ọhụrụ nke Samsung Galaxy S8, na-enye anyị akwụkwọ akụkọ abụọ dị mkpa, nke sitere n'aka Galaxy S9
Etu ị ga - esi melite Xiaomi na MIUI 10
[APK] Otu esi etinye Xiaomi Mi Emoji
Twitter ga-alaghachi n'usoro oge na tweets ya
Twitter ga-egosiputa tweets na usoro oge. Chọpụta ihe banyere mgbanwe ndị a na-ewebata na ngwa a ma ama.
Izu ọka sitere na ndị ala ọzọ na fun Space Loops
Space Loops bụ arcade mara mma nke nwere ezigbo ụdị eserese, nke ọrụ anyị bụ inweta ọka sitere n'aka ndị ọbịa ọjọọ.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-enweta MIUI 10 n'ọnwa a. Chọpụta karịa maka imelite ekwentị gị na ụdị a nke Nhazi onwe.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe Samsung Galaxy S6, ị nọ n'udo. A tọhapụrụ ROM iji melite ya na Android Pie.
Etu ibudata ma tinye akpụkpọ anụ elekere maka Amazfit gị
Ogidi ahụ bụ ihe nkiri 3D emere maka idozi esemokwu
Ogidi bụ egwuregwu 3D nke na-eburu gị site na mgbagwoju anya dị iche iche na ụwa nke ọma na-emezu. Ọ ka dịkwa na beta.
Pocophone F1 ga-emelite gam akporo Pie n'oge na-adịghị anya
Gam akporo achịcha na-abịa Pocophone F1 n’oge adịghị anya. Chọpụta karịa maka mmelite nke na-abịa n'oge na-adịghị anya na ekwentị ndị China.
Uru na ọghọm nke dịrị gị gam akporo ekwentị. Chọpụta karịa uru na ọghọm usoro a na-enye gị.
Kedu ihe bụ na gịnị bụ ọnọdụ HDR nke igwefoto gị?
Ihe ọ bụ, ihe ọ bụ maka na mgbe ị ga-eji ọnọdụ HDR na igwefoto gị. Chọpụta ihe ọ bụ na uru nke ọnọdụ HDR dị na ekwentị gam akporo anyị na-enye anyị.
Nwoke ma ọ bụ Vampire, ị na-ekpebi nnukwu RPG a zuru oke yana akụkọ dum ịmara
Nwoke ma ọ bụ Vampire nwere ike ịnya isi nke ngosipụta teknụzụ dị ukwuu iji gosipụta eserese dị egwu n'ọtụtụ oge.
Etu ị ga - esi mara oge batrị dị na gam akporo na - ewe
Etu ị ga - esi mara ogologo oge batrị gam akporo na - ewe. Chọpụta ihe banyere ụzọ abụọ ahụ iji chọpụta oge ịchọrọ.
MIUI 10 rutere na Mi 5, Mi 6, Mi Mix 2 n'etiti ekwentị ndị ọzọ
Udị zuru ụwa ọnụ nke MIUI 10 na-abịa na ekwentị Xiaomi mbụ. Chọpụta ihe gbasara mgbasawanye nke mbipute a nke nhazi akpaaka.
Otu esi egbochi ekwentị gam akporo gị ka ị na-ekpo ọkụ mgbe ị na-egwu Fortnite
Etu ị ga - esi gbochie mkpanaka Androis gị ka ọ ghara inwe oke egwu na - akpọ Fortnite. Chọpụta ndụmọdụ ndị a iji nyere ekwentị gị aka ikpo ọkụ.
Kedu ikike a na-arịọ site na ngwa gam akporo. Chọpụta ikikere kachasị na gam akporo yana otu esi ejikwa ha.
Etu ị ga - esi melite ọsọ nke netwoki WiFi na gam akporo
Etu ị ga - esi melite ọsọ nke netwoki WiFi na gam akporo. Chọpụta usoro dị mfe iji melite ọsọ gị na usoro ole na ole.
Vda Vampire: Origins dị ezigbo mma RPG zuru oke na-esi ísì ụtọ
Vampires Fall: Origins na-atụ aro a mma RPG na-ewe gị site na ụwa efu. Iji gosipụta ikuku e kere site na ụda olu.
3 SwiftKey aghụghọ ị ga-arụ ọrụ iji melite ahụmịhe ederede gị na ekwentị gị
SwiftKey bụ ngwa keyboard dị ukwuu ma aghụghọ ndị a na-eme ka anyị nwekwuo obi ụtọ mgbe anyị na-ede ihe na nkata, netwọkụ mmekọrịta na ndị ọzọ.
Etu esi ehichapu ozi ịntanetị n'ọtụtụ na clicks ole na ole
A na-emewanye Kidsmụaka YouTube site na iji ngwaọrụ igbochi ndị nne na nna
Kidsmụaka YouTube na-enyekwu nne na nna ọtụtụ ihe igbochi. Chọpụta karịa banyere mgbanwe emere na ngwa ahụ.
Nokia 3.1 malitere imelite gam akporo 8.1 Oreo. Chọpụta karịa maka mmelite ahụ na-amalite ịbata na ekwentị a.
Achịcha Android anaghị egosi na data nkesa nke September na September
A naghị ahapụ Android achịcha na nkesa nke September na September. Google na-ebipụta data nkesa maka ọnwa nke Septemba na-enweghị mgbanwe ọ bụla.
Maka ezigbo trekkies: ị nwere ike ịga njem ụyọkọ kpakpando na Star Trek Trexels II
Na Star Trek Trexels II, ị ga-ewu ụgbọ mmiri gị iji pụọ iji chọpụta oghere dị n'elu ma chọta ihe odide akụkọ ifo kachasị.
Mepee, ngwa na-adọrọ mmasị iji mepụta Akụkọ Instagram n'ụzọ dị mfe
Emeghe bụ ngwa zuru oke iji mepụta ọdịnaya maka Akụkọ Instagram. Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke Instagram, ọ bụ ngwa dị mkpa.
All banyere WebApps, a oké ọzọ ka ot ngwa
Spotify okpukpu atọ karịa egwu anyị nwere ike ibudata
Spotify ga-ekwe ka anyị na-download atọ na songs. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ewebata na ngwa Swedish ama ama.
Na Chebe ị ga-edebe data gị na nzuzo site na njigide nke ọtụtụ ngwa
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka ngwa ọbụla were data ọ na - enweta site na Google API nke ekwentị gị, Chebe bụ ngwa na - akwụghị ụgwọ nke na - emepụta Sandbox.
Nokia 7 Plus na-anata Android Pie Beta 4.1 kama iji nweta nsụgharị ikpeazụ dịka e mere atụmatụ
N'abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa Ọgọstụ, anyị bipụtara otu akụkọ sitere na nke Nokia's South African division, Nokia 21…
Nke a bụ ihe ụmụ amaala gam akporo shouldma Ọkwa kwesịrị ịdị ka !!
"Top Picks" na-abata na Tinder: ndepụta kwa ụbọchị na ahaziri nke ndị ga - ekwe omume "egwuregwu"
Na Tinder Gold ị ga-enwe n'aka gị Top Picks, kwa ụbọchị, ndepụta ahaziri nke egwuregwu enwere ike iji malite ọbụbụenyi.
Niagara Launcher, onye na-ebupụta ngwa maka ndị ọrụ na-achọ ihe dị iche
Ọ bụrụ n'ị na - achọ ahụmịhe ọzọ mgbe ị na - ejikọ ekwentị gị, Niagara Launcher bụ ngwa ngwa nke na - enye ya zuru oke. Ugbu a na steeti beta.
H3H3: Nke na-agba agba agba agba na-abịa na mkpanaka gị na HXNUMXHXNUMX: Ball Rider
H3H3: Onye na-agba bọọlụ bụ nnukwu ebumnuche nke ị ga - anakọta mkpokọta nke ajirija maka nnukwu protagonist ịchụpụ ha.
[APK] Download ugbu a mmelite nke PUBG Mobile na map ọhụrụ 'Sanhok', egbe egbe na ọtụtụ ndị ọzọ
Ugbo ala abuo, uzo ohuru, egbe ohuru, egbe oku, ikpo oku na otutu ihe ndi ozo na echere gi na PUBG Mobile.
3 Mods maka WhatsApp iji hazie ngwa ahụ
Chọpụta mods atọ a ị nwere ike ibudata iji hazie ojiji nke WhatsApp. Gbanwee interface ha ma nweta atụmatụ ndị ọzọ na ha.
Redirịba ndetu ngwa maka gam akporo !!
Wall Kickers bụ ezigbo ezigbo nyiwe maka gam akporo gị
Ezigbo nyiwe bụ ihe Wall Kickers bụ. Egwuregwu nke na-apụ apụ maka ọtụtụ ihe odide dịgasị iche iche ka a ga-emeghe, nke ọ bụla nwere ikike nke aka ya.
A na-emelite Firefox site na melite sistemu ngosi
Ọbụghị naanị Chrome ka ndị ọrụ gam akporo nwere ike ibi, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ịbụ na a jikọtara nke ọma na ngwaọrụ gam akporo niile na-eru Ntuziaka nke Mozilla Foundation guzobere, Firefox na-aga n'ihu na-eme ka nzuzo anyị kawanye mma site na ịgbasa ọrụ ya
E tinyeworị Fortnite na ihe karịrị 15 nde gam akporo ngwaọrụ
Otu n'ime egwuregwu kachasị atụ anya na ahịa ekwentị mkpanaaka na gam akporo, ebe ọ bụ na ọ bịarutere iOS na March gara aga, ọ bụ Fortnite, egwuregwu nke rutere Ebe ọ bụ na ngosipụta ya na August 9, ebudatara egwuregwu Fortnite ugboro 15 ugboro na gam akporo ọnụ
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịakwute nri Google
Nri Google na-enweta ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Ngwa ọhụrụ na-esonye na ndepụta ahụ wee nweta ọnọdụ ọchịchịrị a site na Google, ọ bụ ezie na ule.
Dị kwụsiri ike nke MIUI 10 ruru 12 Xiaomi igwe
MIUI 10 rutere nkwụsi ike na ekwentị 12 Xiaomi. Chọpụta karịa maka mmelite usoro nhazi nke Xiaomi.
Emechiri Tor Browser na Storelọ Ahịa Play
Ihe nchọgharị Tor na-abịa maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ihe nchọgharị a maka gam akporo igwe ugbua na Storelọ Ahịa Play.
Armajet, frenetic cross-platform multiplayer shooter na njikwa ihe osise na ọtụtụ ihe
Armajet bụ onye na-agba ọsọ ọtụtụ egwuregwu nke nọ na beta beta mechiri emechi ma jiri usoro omume ọma mara ọkwa.
Etu esi gbanyụọ Google Assistant na ekwentị gị
Etu esi gbanyụọ Google Assistant na gam akporo. Ike gwụrụ Google Assistant? Anyị na-akuziri gị otu esi kwụsị iji ya na ekwentị n'ụzọ dị mfe.
Gini mere ekwentị gam akporo gi ji ekpo ọkụ?
Ihe kpatara ekwentị gam akporo gị ji ekpo ọkụ. Chọpụta ụfọdụ ihe nwere ike ime kpatara ekwentị gam akporo gị na-ekpo ọkụ
Motorola ga-anwale Android Oreo na Moto G4 Plus
Motorola amalite ịnwale Oreo na Moto G4 Plus n’oge na-adịghị anya. Chọpụta ihe banyere mbata nke gam akporo Oreo na ekwentị.
Aghụghọ iji nweta ihe na ekwentị gị NFC
Wayszọ abụọ iji nwetakwuo na NFC gam akporo gị. Chọpụta usoro ndị a dị mfe ma nweta ọtụtụ ihe na teknụzụ a.
Etu esi echekwa mkparịta ụka WhatsApp na Okwu
Etu esi echekwa mkparịta ụka WhatsApp na Okwu. Chọpụta usoro ị ga - eso iji nweta nkata na usoro a na ekwentị gị.
Otu esi eme ka bọtịnụ anụ ahụ rụọ ọrụ maka Google Assistant na ekwentị gam akporo gị
Otu esi eme ka bọtịnụ maka Google Assistant na ekwentị gam akporo gị. Chọpụta usoro iji nweta bọtịnụ anụ ahụ na ekwentị.
Otu esi eri obere batrị na gam akporo mgbe ị na-eji WiFi
Otu esi echekwa batrị na gam akporo mgbe ị na-eji WiFi. Aghụghọ na-eri obere batrị mgbe ị na-eji WiFi na ekwentị gam akporo gị.
Gam akporo Oreo malitere iru na Moto G5 na G5 Plus. Chọpụta ihe banyere mbata nke mmelite maka ekwentị ndị a.
Alphabear 2 dị ugbu a na gam akporo: melite okwu gị site na ịsụpe okwu bekee
Ọ bụrụ n ’ịnọ n’ụzọ imeziwanye bekee gị, Alphabear 2 bụ ụzọ kachasị mma iji meziwanye okwu iji mee ka iwu nke asụsụ anyị bawanye.
Maka ahụmịhe kachasị mma YouTube nwere, budata YouTube enwere ike ichefu banyere mgbasa ozi ma kpọọ na ndabere.
Ọhụrụ interface ị nwere ike ịnweworị na mkpanaka gị abịala. Ọ bụrụ na ọ bụghị, wụnye Netflix APK iji nweta ya.
Otu esi eme ka ọnọdụ amachibidoro na YouTube
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, onye ọrụ ọchụchọ ahụ na-ewebata ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ n'ime ngwa ngwa ya, YouTube. Otu n'ime ihe kachasị N'isiokwu a anyị na-egosi gị otu anyị nwere ike isi rụọ ọrụ ọnọdụ amachibidoro na YouTube, iji gbochie obere ụmụaka ịnweta ọdịnaya dị nro.
(Emelitere, gbakwunye vidiyo) Otu esi eme ka YouTube gbara ọchịchịrị okwu ugbu a ọ dị
Chebe bọọlụ kachasị amasị gị na ụgwọ niile akwụ elu
Egwuregwu iji rute balloon gị ruo ebe dị elu, ọ bụrụhaala na ọtụtụ puku ihe ga-agba mbọ bibie ya.
Google Play ga-ebido usoro iguzosi ike n'ihe
Google Play ga-amalite usoro iguzosi ike n'ihe ya n'oge na-adịghị anya. Chọpụta ihe gbasara mmemme a na-abịa ngwa ahịa ngwa ngwa.
Etu ị ga-esi tụọ anya dị anya na ngwa Google Meji na mkpanaka gam akporo gị
Ihe bụ ngwa nke na-enye anyị ohere iwere ngwa nke igwefoto anyị iji mee nha nke ihe ma ọ bụ ụzọ ọ bụla.
Ihe osise Cartoon na-eburu gị gaa na esemokwu na-enweghị njedebe n'etiti mmadụ na orcs
Ọ bụrụ n’ị na-achọ atụmatụ n’ezie ma ọ bụ egwuregwu RTS, ya na Cartoon Craft ị na-enwe ihu ọma. Egwuregwu na-enweghị atụ dị elu.
Galaxy Note 5 na Galax S6 Edge + ga-akwụsị ịnweta mmelite nche kwa ọnwa
Koreanlọ ọrụ Korea bụ Samsung kwupụtara na Galaxy Note 5 na Galaxy S6 Edge + agaghịzi enweta mmelite kwa ọnwa kwa ọnwa Nwelite nche kwa ọnwa maka Galaxy Note 5 na Galaxy S6 Edge abụghịzi eziokwu.
Mi X obubata, The MIUI 10 launcher
Klick Klack - Obere ụlọ mkpọrọ gbagọrọ agbagọ maka mgbaghoju anya na-eri ahụ
Klick Klack bụ ihe mgbagwoju anya dị mfe nke ị ga - enyere bọọlụ iji chịkọta ọla edo niile gosipụtara n'ụzọ ya.
Obere ihe na-erughị otu izu gara aga, na Ọgọstụ 29, onye ọrụ ibe m Manu gwara gị maka mbata nke Rootless Pixel Launcher na Storelọ Ahịa Play, Google ewepụrụla ngwa Rootless Pixel Launcher site na Storelọ Ahịa Play n'ihi na ọ dara iwu nke ụlọ ọrụ ahụ. .
Ga-anụ ụtọ gị Android Androidma Ọkwa ọzọ.
Etu ị ga - esi mee ka ogwe igodo gam akporo gi nwee ndu di egwu
Ihe bụ wijetị dị ịtụnanya na-enweghị ego iji detuo ihe ma ọ bụ ihe edepụtara iji rụọ ọrụ na-enweghị njedebe
Ọ bụrụ na ị na-achọ wijetị ndepụta ndepụta dị ike ma dị mfe, Stuff bụ ihe pụrụ iche ị nwere ike ịnweta n'efu.
Achọpụta ihe ọghọm nke na-enye ohere nsuso ekwentị ọ bụla emelitere na gam akporo 9.0 achịcha
A vulnerability na-enye ohere nsuso nke ekwentị emelitere na gam akporo achịcha. Chọpụta ihe banyere nsogbu nchekwa a achọpụtara na gam akporo.
Amalitere beta nke mepere emepe nke gam akporo 9.0 achịcha maka OnePlus 6
OnePlus na-ebupụta gam akporo 9.0 Pie emeghe beta maka OnePlus 6. Chọpụta ihe banyere mmalite nke beta a na-emeghe maka njedebe dị elu.
Super Starfish, ma ọ bụ chịkọta ọtụtụ azụ sara mbara iji mee ka aquarium ohere gị dịrị ndụ
O doro anya na Super Starfish bụ otu n'ime ihe kacha mma emere na afọ a. A dum graphic gbawara na esịmde ihuenyo gị mobile.
Nke a bụ ụdị ọhụrụ nke Samsung Health: interface ọhụrụ ma ugbu a na-atụle ogo nrụgide
Samsung Health rutere nsụgharị 6.0 iji dozie onwe ya dịka ngwa ahụike kachasị mma. Ugbu a, ị nwere ike ịlele nchekasị ma nwee ọhụụ ọhụụ.
Esi rụọ ọrụ Incognito na YouTube maka gam akporo
Ọnọdụ incognito abụrụ ihe kacha mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na ọ naghị eme ihe niile ọ na-ekwe nkwa ebe ọ bụ na ị na-arụ ọrụ abalị n'abalị na YouTube ga-enye anyị ohere ịhapụ ịhapụ akara na ekwentị anyị nke ọchụchọ anyị na-ebu.
Nchịkọta kuki zuru ezu na-echere gị na kuki agha iji chee egwuregwu ndị ọzọ ihu
Agha kuki bụ egwuregwu echepụtara nke ọma banyere ụlọ elu na-enwe ọtụtụ ọdịnaya na nnukwu nka na ụzụ n'ọkwa niile.
EMUI 9 dabeere na android achịcha beta na-abịa Huawei na Honor
Ekwentị Huawei na Honor mbụ nwere gam akporo achịcha beta. Chọpụta ụdị nke ugbua nwere EMUI 9.
Gam akporo Oreo rutere n’ahịa na 14,6% n’August
Android Oreo kwubara dị ka nke anọ kachasị eji mbipute. Choputa ihe banyere onu ogugu ohuru maka uzo di iche iche nke gam akporo.
Nova Video Player, a mma na-emeghe iyi video ọkpụkpọ maka ekwentị gị ma ọ bụ gam akporo TV
Nova Video Player bụ ihe na-emeghe ma na-enye usoro omume ọma dị iche iche ka ọ bụrụ ihe ọzọ na VLC Player a ma ama.
Enyemaka Google nwere ike ịghọta asụsụ abụọ n'otu oge
Onye na enyere Google aka ịghọta asụsụ abụọ n'otu oge. Chọpụta ihe banyere teknụzụ ọhụụ ọkachamara ahụ na-eji ugbu a.
Grand Mountain Adventure na-atụ aro egwuregwu skai dị ka ọ dịtụbeghị mbụ
Jidere gị skis na isi na Grand Mountain Adventure, a ezi skai egwuregwu ebe ị ga-inyocha na-emeghe ugwu maka gị ụtọ.
Versiondị ọhụrụ nke Wear OS ga-erute ọtụtụ elekere. Chọpụta ụdị nke ga-enweta mmelite nke ụdị ọhụụ a.
Google na-emelite Wear OS interface
Wear OS emelitere na interface ọhụrụ. Chọpụta mgbanwe Google na-ewebata na ntanetị nke sistemụ elekere.
Nnukwu dragọn ahụ agụụ na-agụ ugbu a na gam akporo: bụrụ nnukwu dragọn na-eri nri
Jikere aka ijiri dragon na-eri nri na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ. Egwuregwu nke ghọrọ otu n'ime ihe kacha mma n'afọ a.
Rootless Pixel Launcher bụ kpọmkwem ihe mbụ ederede nke Google Pixel launcher. Ugbu a maka onye ọ bụla nwere gam akporo 5.0 ma ọ bụ karịa.
Dragalia Lost bụ egwuregwu ọzọ nke Nintendo ga-ebido na Septemba 27 maka ekwentị
Dragalia Lost bụ egwuregwu mbụ nke Nintendo maka ngwaọrụ mkpanaka nke ga-ada na Septemba 27. Ọbịbịa dum.
Facebook Watch na eze bịarutere Spain
Facebook Watch adịlarị na Spen. Choputa oru vidiyo ohuru nke etinyebere na netwọkụ mmekọrịta kacha ewu ewu.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na-abịa na ngwa ekwentị Google
Ngwa ekwentị Google ga-enweta ọnọdụ ọchịchịrị. Chọpụta maka ngwa ọhụrụ iji sonyere ọnọdụ gbara ọchịchịrị nke na-abịa n’oge adịghị anya.
Huawei gosipụtara beta nke gam akporo 9.0 achịcha maka ekwentị 9
Huawei kwupụtara mmemme beta 9.0 achịcha beta maka ekwentị 9. Chọpụta karịa maka mmemme beta a nke akara ndị China.
Otu esi choo oru banyere Google maka Jobs na ngwa gam akporo gi
Emepere Google maka Ọrụ 3 ọnwa gara aga na Spain ma na-enye nnukwu nsonaazụ maka ndị chọrọ ịbanye na ọrụ ọrụ.
Versiondị ikpeazụ nke MIUI 10 malitere ịmalite
Versiondị ikpeazụ nke MIUI 10 na-amalite ịbịaru na Xiaomi Mi 6. Chọpụta ihe banyere mbata nke mbipụta ikpeazụ nke nhazi oyi akwa.
Telegram 4.91: Mmelite paspọtụ na ọkwa ka mma
A na-emelite Telegram na mmelite na Paspọtụ na ọkwa. Chọpụta mgbanwe na ụdị ọhụụ nke ngwa izipu ozi.
Kụ Azụ na Nkụ Azụ, nhọrọ ọzọ na - egbochi Azụ Azụ
Agụụ iskụ azụ bụ ihe ọzọ maka ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama dị n'etiti ịnọ na n'efu.
Onye nhazi nke Fortnite nwere nnukwu nsogbu nchekwa
Site na ngosipụta nke Galaxy Note 9, bịara ọkwa ọkwa sitere n'aka Epic Games nke mwepụta nke Fortnite, otu n'ime egwuregwu ndị kachasị atụ anya, The Epic Games installer iji nwee ike ibudata Fortnite na ngwaọrụ gam akporo nwere nsogbu nchekwa dị njọ nke Google chọpụtara ma nke ahụ edoziworị.
Ozi Android na-ewebata isiokwu gbara ọchịchịrị na ngwa ahụ
A na-emelite ozi gam akporo site na iwebata ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Chọpụta maka ọnọdụ gbara ọchịchịrị nke na-abịa na ngwa izipu ozi.
PayPal na-emelite atụmatụ nke ngwa ya
PayPal ga-ewebata usoro ọhụụ n'ime izu ndị na - abịanụ. Chọpụta karịa gbasara mgbanwe nke ngwa ịkwụ ụgwọ na-ewebata.
Ayszọ iwepụ ngwa na gam akporo
Wayszọ anọ iwepụ ngwa na gam akporo. Chọpụta ụzọ ndị a anyị nwere ike isi wepu ngwa na ekwentị anyị.
Samsung Galaxy J5 (2017) malitere ịnata Android 8.1 Oreo
The Galaxy J5 (2017) na-amalite mmelite gam akporo 8.1 Oreo. Chọpụta ihe gbasara mmelite ekwentị Korean brand.
Madden NFL Overdrive Football na-eme ka ọ dị gị ka ị bụ akụkụ nke otu egwuregwu bọọlụ America
Madden NFL Overdrive Football sitere na Electronic Arts wuru site na ncha ọ na-egosi site na oge mbụ anyị malitere ya.
Ngwa nchekwa kacha mma maka gam akporo
Ise nche kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke ngwa nche na Storelọ Ahịa Play.
All ụzọ mara IMEI nke gị gam akporo ekwentị
Wayszọ anọ mara IMEI nọmba gị gam akporo ekwentị. Chọpụta ụzọ ndị a iji chọpụta ihe nọmba IMEI nke gam akporo ngwaọrụ bụ.
Gbaa àkwá iji zọpụta ndị enyi gị ọkụkọ na ndị nwụrụ anwụ na FireEgg
FireEgg agaghị agbada na akụkọ egwuregwu vidiyo, mana ọ ga - eme ka ị nwee ezigbo oge. Karịsịa ruo mgbe ị ga-esi melite ọkụkọ.
Huawei Mate 20 na Mate 20 Pro ga-abịa na gam akporo
Huawei Mate 20 ga-enwe A gam akporo na ndabara. Chọpụta ihe banyere sistemụ arụmọrụ nke ekwentị Huawei ọhụrụ ga-enwe.
Chekwa umu aturu di uto na obi uto Bye Bye Sheep
Bye Bye Sheep bụ egwuregwu na-atọ ọchị ebe ị ga-azọpụta obere atụrụ site na mma anụ ọhịa na-eyi egwu nke na-esi n'oké ọhịa.
Nokia na-ebuchi bootloader na nwelite nchedo ọhụụ
Afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị raara onwe ha nye iji wụnye omenala ROM iji nweta ọtụtụ ihe na njedebe ha n'ihi mmelite nchedo kachasị ọhụrụ nke Nokia wepụtara, gbochie ohere ị nwere ike ịmeghe bootloader nke ọdụ ha. , mkpebi nke i mere na-ekwughị ya na mbụ.
Gam akporo Otu ga-enwe mmelite nche kwa ọnwa
Gam akporo Otu igwe ga-enwe mmelite nche kwa ọnwa. Chọpụta karịa banyere mmelite ndị a.
Iji jiri slingshot iji chebe lollipops gị na nnukwu Candy Patrol
Oge a anyị nwetara ọtụtụ nnukwu anụ chọrọ lollipops anyị. Mechaa ha na Candy patrol na slingshot gị
OnePlus 5 na OnePlus 5T enweela nkwado maka Treble
The OnePlus 5 na OnePlus 5T dakọtara na Project Treble. Chọpụta maka mmelite a na-enye ohere nkwado a.
Zụọ ebe nchekwa gị na egwuregwu ọchị ọchị ọchị chee ihu na "onye bụ onye"
Chepụta ihu bụ ikuku ọhụrụ maka Playlọ Ahịa Google Play site na ịtụ aro ka ị buo isi atụmatụ nke agwa maka sekọnd.
Gmail maka gam akporo na-enye gị ohere ịmeghe izipu ozi. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ewebatala na ngwa ahụ.
Pokémon Go chụpụrụ ndị ọrụ nwere faịlụ mgbọrọgwụ. Chọpụta karịa maka ebugharị mkpọmkpọ ebe a na egwuregwu Niantic ụbọchị ndị a.
Ndị nwamba ụgbọ mmiri bụ ihe ọhụrụ site na ụlọ egwuregwu egwuregwu Madrid a na-akpọ Platonic Games
Nwamba Ahịhịa bụ egwuregwu nchịkọta emere site na ụlọ ọrụ Madrid nke chọrọ n'ezie ịbụ ntụaka.
Etu esi ebudata gReader, otu n'ime ndị na - agụ RSS kachasị mma furu efu na Playlọ Ahịa Google
O juru anyị anya na gReader anyị apụla na Playlọ Ahịa Google. Anyị na-egosi gị otu esi ebudata onye na-agụ RSS a ọzọ.
Ihe ndekọ ederede nke Microsoft iji wepụta Afọ a na gam akporo
Microsoft ga - ahapụ ndetu ederede maka gam akporo afọ a. Chọpụta ihe banyere ntọhapụ nke ngwa ndetu na gam akporo.
Snapchat ga-ebupụta nsụgharị ọhụrụ nke ngwa ya maka gam akporo
Versiondị ọhụrụ nke Snapchat na-abịa gam akporo n'oge na-adịghị anya. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke ngwa ahụ na-abịa n'oge adịghị anya.
Ngwa kacha mma foto maka gam akporo
Ise ise kacha mma foto maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a anyị nwere ike ibudata na gam akporo.
Adịchaghị egwuregwu Android bara uru nbudata
Atọ adịchaghị gam akporo egwuregwu uru nbudata. Chọpụta ihe banyere ndị a adịchaghị egwuregwu n'ihi na gam akporo igwe.
Eze na-ewetara anyị ihe ọhụụ: Legend of Solgard, RPG gbanwere nke ọma
Ọ bụrụ na ị bụ onye egwuregwu egwuregwu EZE, lee ihe dị iche iche ị ga-ewere na Legend of Solgard, egwuregwu freemium.
Ọ bụrụ n ’ị ga-atụ uche Sim City, lee, ọ bụ Pocket City maka gam akporo gị
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado nke ochie Sim City, Pocket City bụ ihe kachasị mma ị ga-ahụ ugbu a na gam akporo. Nanị magburu onwe ya.
Ngwa kacha mma gam akporo maka ndị egwu
Ise kacha mma gam akporo ngwa ọdịnala maka ndị egwu. Chọpụta nhọrọ ndị a nke iji jiri egwu egwu.
Bendy na Nightmare Run, onye na-adịghị agwụ agwụ dị ka Cuphead maka ekwentị mkpanaaka gị
Bendy na Nightmare Run bụ onye na-elekọta ndị na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ na Cuphead aesthetics nke ga-enyere gị aka ịmata animation nke 30s.
Galaxy Note 8 na-anata August nche patch
Ihe nchebe nche nke August na-abịa na Galaxy Note 8. Chọpụta maka ihe nkedo nke na-akụ Samsung's end-end these days.
Usoro 5 iji bụrụ onye ọkpụkpọ ka mma na Fornite maka gam akporo
Anyị na-akụziri gị aghụghọ aghụghọ 5 iji bụrụ onye ọkpụkpọ ka mma na Fortnite maka gam akporo. A aha na-eweta niile spectacity nke ochie nsụgharị.
Kung Fu Z, ma ọ bụ otu esi echekwa mmadụ ọzọ site na zombie apocalypse (oge a na kicks)
Ọ bụrụ na zombies na nka mara mma bụ ihe gị, Kung Fu Z bụ egwuregwu dị mma maka ya. Laghachi na ekpomeekpo achicha mara mma.
A gam akporo 9.0 achịcha ga-enwe ụdị Go maka maka njedebe dị ala
A ga-ahapụkwa Android 9.0 achịcha na usoro gam akporo Go. Chọpụta ihe banyere ụdị fechaa ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Kpọọ ndekọ ngwa anaghị arụ ọrụ na gam akporo 9.0 achịcha
A gam akporo 9.0 achịcha na - egbochi ngwa ijikọ oku. Chọpụta ihe banyere mkpebi na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Google iji dozie nsogbu Pixel XL na-agba ọsọ ọsọ ọsọ
Google ga - eweta ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa nke Pixel XL. Chọpụta ihe banyere nkwupụta nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ngwọta
Na KleptoDogs ụmụ nkịta kachasị mma na-eche gị na ị ga-elebara anya, saa ma kwụọ ụgwọ
KleptDogs bụ egwuregwu na-atọ ọchị nke ị ga-ama etu esi elekọta ọtụtụ nkịta. Ziga maka ihe iji kpokọta ha.
Ekwentị Nokia izizi iji melite gam akporo 9.0 achịcha ekpughere
Ndị a ga-abụ ekwentị Nokia izizi nwere gam akporo 9.0 Pie. Chọpụta ụdị ndị ga-abụ nke mbụ iji melite.
Twitter Lite ruru mba ọhụrụ 21 nwere atụmatụ ọhụrụ
Twitter Lite na-agbasawanye na mba ọhụrụ 21 nwere atụmatụ ọhụrụ. Chọpụta karịa maka ọganihu ngwa Lite na ahịa.
Biri n’anụ ahụ gị ahụmịhe ahụ gbasara njirimara nke V
Njirimara V bụ egwuregwu egwu nke na-etinye gị na akpụkpọ ụkwụ onye nyocha na usoro ihe odide ndị ọzọ. You'll ga-abụdị ajọ mmadụ na fim ahụ.
Batrị nke Galaxy Note 9 dị ezigbo mma, Samsung kwuru
Samsung Galaxy Note 9 batrị dị nchebe karịa mgbe ọ bụla. Chọpụta ihe usoro ụlọ ọrụ siri ike iji chebe batrị.
Google Phone ngwa mmelite na Ihe Kere
A na-emelite ekwentị Google na ihe eji emepụta ya na ntanetị. Chọpụta ihe gbasara imelite ngwa ekwentị.
Ngwa kacha mma iji gbochie oku na gam akporo
Anọ kacha mma ngwa igbochi oku na gam akporo. Chọpụta ihe gbasara ngwa ndị a dị na Storelọ Ahịa Play.
HTC kwupụtara ekwentị ndị ga-emelite na gam akporo 9.0 achịcha. Chọpụta ndepụta nke ekwentị mbụ nke ika ahụ ga-ebu ụzọ melite.
Egwuregwu bọọlụ kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu anọ kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwu bọọlụ maka ekwentị gam akporo adịla adị
Ekwentị Sony ndị ga-enweta gam akporo 9.0 achịcha kpughere n'oge na-adịghị anya. Chọpụta ụdị ndị ga-abụ ndị mbụ ga-enweta mmelite ahụ.
Ndị dike Disney: Ọnọdụ agha na-ewetara gị ndị dike Disney na Pixar n'otu RPG
Ndị dike Disney: Ọnọdụ agha bụ egwuregwu nwere ụfọdụ ihe egwu na-emetụ nke ị ga - etolite otu iji chekwaa nje ahụ site na obodo dijitalụ.
PUBG MOBILE Lite: mobiledị mkpanaka ahụ nke na-erughị 2 GB nke RAM
PUBG MOBILE Lite: versiondị maka ekwentị ndị dị ala. Chọpụta ihe banyere ụdị egwuregwu ọhụrụ a maka ekwentị ndị dị ala,
Foto Google ga-ewebata ndezi ihe oyiyi 3D
Foto Google ga-enye gị ohere idezi onyonyo na 3D. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ na-abịa na ngwa gam akporo ewu ewu.